QM oo ka shiraysa sababtii Soomaaliya looga soo ceyriyay Nicholas Haysom – Radio Daljir
QM oo ka shiraysa sababtii Soomaaliya looga soo ceyriyay Nicholas Haysom
Janaayo 3, 2019 8:59 b 0
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa maanta ka doodaya sababihii keenay in dalka Soomalaiya laga ceyriyo Wakiilkii Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Nicholas Haysom iyo xaalada Soomalaiya .
Shirka ayaa waxaa qudbad ka jeedin doonay Nicholas Haysom ,waxaana lafilayaa in qudbadiisa uu diirada ku saaro wax yaabihii ay dowladda Soomaaliya isku qabteen , sida xaalada Amnaaka iyo arimaha xuquuqul insaanka .
Talaadadii la soo dhaafay ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in shaqadii ka jojisay Wakiilkii Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Nicholas Haysom , kadib markii uu ku xad gudbay madaxbanaanida dalka Soomalaiya .
Haysom ayaa dhankiisa qoraal uu so saaray waxa uu kaga codsaday dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo in ay warbixin ka siiso tacadiyadii ka dhacay magaalada Baydhabo intii ay soctay doorashada mamaulkaasi Koonfur Galbeed .
Warar hoose oo ay helayso idaacada Daljir ayaa sheegaya in go,aankii ay qadatay dowladda Soomaaliya uu yahay kii ugu dambeeyay .
Issimada Puntland oo go’aan soo saaray (Daawo)
Musharixiinta madaxwaynaha Puntland iyo issimada oo buriyay go’aankii lagu mamnuucay inay madaxda faderaalka imaan karaan Garoowe